कर्मचारी अभाव झेल्दै रौतहट- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कर्मचारी अभाव झेल्दै रौतहट
जिल्लाभरका सरकारी कार्यालयमा ३० प्रतिशत दरबन्दी खाली
गौर अस्पताल ३ वर्षदेखि चिकित्सकविहीन
मंसिर १०, २०७८ शिव पुरी
रौतहट — जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा लामो समयदेखि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा कामकाज प्रभावित बनेको छ । सबै कार्यालयमा गरी हाल झन्डै ३० प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्मचारी अभावले गौर अस्पतालमा रहेको भेन्टिलेटर र आईसीयू कक्ष सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा एक जना पनि नभएपछि एक वर्षदेखि भेन्टिलेटर र आईसीयू सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
अस्पतालको माथिल्लो तल्लामा १० बेडको आईसीयू र ४ वटा भेन्टिलेटर मेसिन जडान गरिएको छ । ‘दरबन्दीअनुसार चिकित्सक पठाइदिनुस् भनेर हारगुहार गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै सुनवाइ भएन,’ अस्पताल प्रमुख डा. कृष्ण साहले भने, ‘कोरोना महामारीका बेला पनि चिकित्सककै अभावमा गम्भीर बिरामीलाई धमाधम बाहिर रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’ उनका अनुसार अस्पताल चिकित्सकविहीन भएको ३ वर्ष भइसकेको छ । अस्पतालको पीसीआर प्रयोगशालामा १४ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा हाल ५ जनाले सेवा दिइरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा पनि कर्मचारी अपुग छ । प्रशासनमा लामो समयदेखि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृत तथा ४ जना नायब सुब्बा र २ जना खरिदारको दरबन्दी खाली रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले बताए ।
‘जिल्लाभर कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । सरुवा भएकाहरू पनि रौतहट आउन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘मेरै आफ्नै कार्यालयमा कर्मचारी छैनन् । अरूको के कुरा गर्नु ? कार्यालयको बैठकमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएर समस्या परेको गुनासो मात्रै सुन्छु ।’
उनका अनुसार जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये १५ वटामा उपसचिव छैनन् । खानेपानी, सिँचाइ, सडक, कारागार, इलाका प्रशासनलगायतका कार्यालयमा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । दैनिक सेवाग्राहीको भीड लाग्ने मालपोत कार्यालयमा अधिकृत ३ र नायब सुब्बा ५ जना छैनन् । कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको कार्यालय प्रमुख रामकृण उप्रेतीले सुनाए । डिभिजन वन कार्यालयको समस्या पनि उस्तै छ । १ सय १० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल ९० जना मात्र छन् ।
वनरक्षक र सशस्त्र वन रक्षक नभएकाले समस्या भएको सहायक वन अधिकृत रामप्रसाद साहले गुनासो गरे ।
दरबन्दीअनुसार कर्मचारी माग गर्दा मन्त्रालय र विभागबाट कुनै सुनवाइ नभएको कार्यालय प्रमुखहरूको गुनासो छ । दरबन्दीमा कर्मचारी नपठाएपछि केहीले करारमा राखेर काम चलाउँदै आएका छन् । गौर अस्पतालले केही स्टाफ नर्स करारमा राखेको जनाएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ११:११
चितवन — नेकपा (एमाले)को १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज शुक्रबार मध्यान्ह नारायणगढ नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन हुँदैछ । उद्घाटनअघि विभिन्न ठाउँबाट र्‍याली निस्किन थालेको छ ।
चितवन एमाले अध्यक्ष पार्वती रावलका अनुसार भरतपुरका सात ठाउँमा नेता कार्यकता भेला हुने छन् । त्यसपछि मुख्य तीन ठाउँबाट र्‍याली निस्कने छ । पूर्वी क्षेत्रका लागि भरतपुरको केन्द्रीय बसपार्कबाट र्‍याली निस्कने छ । पश्चिम क्षेत्रका लागि नवलपुर गैंडाकोटमा भेला भएर र्‍याली अगाडि बढ्ने छ । त्यसैगरी मुग्लिन तर्फबाट आउनेहरुका लागि आँपटारीमा भेला भएर र्‍याली अगाडि बढेर उद्घाटन स्थलमा आउनेछ । भरतपुरका अन्य मुख्य चोकहरुबाट निस्कने र्‍याली बसपार्कबाट आउने र्‍यालीमा मिसिँदै अगाडि बढ्ने अध्यक्ष रावलले जानकारी दिइन् ।एमालेले उद्घाटन समारोहमा पाँच लाखलाई सहभागी गराउने दाबी गर्दै आएको छ । महाधिवेशन उद्घाटनका लागि नारायणी नदीको किनारलाई आमसभास्थल तय गरेर भव्य मञ्च निर्माण गरेको छ । आमसभा स्थलमा सबै नअटाउने भएका कारण बाहिर बसेर पनि भाषण सुन्नका लागि ठाउँ ठाउँमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्डहरु राखिने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने महाधिवेशनमा कुल दुई हजार १७५ जना प्रतिनिधि बन्दसत्रमा सहभागी हुने छन् । बन्दसत्र सौराहामा हुँदैछ । उद्घाटनसत्रमा सहभागी हुनेहरुका कारण चितवनको राजमार्ग क्षेत्र र सडकमा भीडभाड बढ्ने भएको हुँदा व्यवस्थापनका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले यातायात सञ्चालन सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ ।मुख्य सडकहरुमा बिहान नौ बजेपछि साँझ पाँच बजेसम्म अत्यावश्यक सेवाबाहेकका गाडीहरु आउन पाउने छैनन् । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले उद्घाटन कार्यक्रमका दिन राजमार्ग क्षेत्रमा ठूला मालवाहक ट्रकबाहेक अरु गाडी रोक्नलाई अनुरोध नगरेको बताए ।
तस्बिरहरु : हेमन्त श्रेष्ठ, सुवास बिडारी, मणि दाहाल, रमेशकुमार पौडेल/कान्तिपुर
प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ११:०७